चाभेको साथ टोफु र फूलगोभी करी | बेजिया
मारिया vazquez | 06/04/2021 10:00 | सलाद र तरकारीहरू
बज्जीयामा हरेक दिन जुन हामी करीलाई बढी मन पराउँछौं, के तपाईंलाई पनि त्यस्तै हुन्छ? कुखुरा र मीठो आलु करी जुन हामीले तपाईंसँग तीन बर्ष अघि साझेदारी गर्यौं हाम्रो मनपर्नेहरू मध्ये एक हो र यसलाई सिर्जना गर्न हामी यसमा आधारित छौं शाकाहारी संस्करण: टोफु र फूलगोभी करी।
यस संस्करणमा कुखुरा टोफू र अन्य तरकारीहरू द्वारा मिठो आलुको अलावा बदली गरिएको छ, नुस्खामा समावेश गरिएको छ। यस नुस्खामा करीसँग यसको ओभरडो छाया गर्ने कोही छैन। यस पटक हामीले टमाटर वा अन्य कुनै घटक थपेका छैनौं जसले यसको रंग वा स्वाद परिमार्जन गर्दछ।
आजको एक कडा र पूर्ण पकवान हो, एकल डिशको रूपमा सेवा दिनका लागि उत्तम। यसको तयारी सरल छ र तपाईंलाई minutes० मिनेट भन्दा बढि लाग्दैन। मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईंले लाभ उठाउनुहोस् र दुई दिनको लागि पर्याप्त बनाउनुहोस्। त्यसोभए तपाइँ यसलाई एक दिन चामलको साथ खान सक्नुहुन्छ र यसलाई अर्को डिनरको लागि खान सक्नुहुन्छ र यसले तपाइँको मूल्य तिर्नेछ। के तपाई यसलाई चलाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
13को लागि सामग्रीहरू
3 को लागि सामग्रीहरू
G०० g टोफु, पाकेको
१/२ फूलगोभी, फूलहरूमा
१ मीठा आलु, पासा
२०० मिली नरिवलको दुध
१/1 चम्मच जमिन जीरा
१ चम्मच कर्नस्टार्च १/२ गिलास पानीमा घुल्यो
पकाइएको चामलको १ कप
सबै सामग्रीहरू तयार पार्नुहोस्।
एक सास प्यानमा दुई चम्मच तेल तातो र मौसमी टोफू साटा गर्नुहोस् Minutes मिनेट वा हल्का खैरो नभएसम्म एकपटक सकियो, प्यानबाट हटाउनुहोस् र रिजर्भ गर्नुहोस्।
उही तेल मा अब प्याज र मरिच फ्राई २० मिनेटको बखत।
पछि फूलगोभी र मीठो आलु मा चलाउनुहोस्, क्यासरोललाई छोप्नुहोस् र तिनीहरूलाई heat-१० मिनेटको लागि मध्यम आँचमा पकाउन दिनुहोस्।
Minutes मिनेट पछि नरिवलको दुध थप्नुहोस्, मसला, कोर्नस्टार्च र मिक्स। To देखि १० मिनेट सम्म वा मीठा आलु कोमल नभएसम्म पूरै पकाउनुहोस्।
टोफू र फूलगोभी करी पकाइएको चामलको साथ सर्व्ह गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » सलाद र तरकारीहरू » चाभेको साथ टोफु र फूलगोभी करी